Maxaad Ka Taqaan 7da Maalqabeen Ee Ugu Hantida Badan Mulkiilayaasha Kooxaha Kubadda Cagta Adduunka? - Wargane News
Home Sports Maxaad Ka Taqaan 7da Maalqabeen Ee Ugu Hantida Badan Mulkiilayaasha Kooxaha Kubadda...
Waxa Jira maal-qabeeno waaweyn oo iska leh qaarka mid ah naadiyada waaweyn ee kubadda cagta adduunka ka dhisan. Waxaad maqashaa Maalqabeenka iska leh naadi Heblaayo iyo naadi heblaayo. Qormadan kooban waxa aynu ku eegi doonaa siddeeda maal-qabeen ee ugu lacagta badan Maal-qabeenada iska leh naadiyadda kubadda cagta adduunka qaar ka mid ah. Arrinta xiisaha lihi waxa weeye iyada oo aanay maal-qabeenada waaweyn ee Maraykanka, Jarmalka, China iyo Japan toona ka dhex muuqan siddeeda Maalqabeen ee ugu lacagta badan mulkiilayaasha naadiyada kubadda cagta adduunka, oo ay ka muuqdaan Maal-qabeeno Carbeed iyo kuwo Ruush ahi.
1-Kaalinta koowaad waxa ku jira Maal-qabeenka weyn ee reer Imaaraad, Sheekh Mansuur Bin Saayid Aal-Nahyaan oo ah Mulkiilaha Shirkadda Diyaaradaha ee Etihad, Maalqabeenkani waa ninka iska leh kooxda kubadda cagta wadanka Ingiriiska ee Manchester City. Hantidiisa waxa lagu qiyaasaa in ay kor u dhaaftay 20-Milyaar oo dollar
2- Maalqabeenka labaad ee ugu lacagta badan maalqabeenada leh qaar ka mid ah naadiyadda kubadda cagta adduunku waa maalqabeenka Ruushka ah ee Alisher Usmanov oo ah ninka boqolkiiba soddon iska leh kooxda kubadda cagta wadanka Ingiriiska ee Arsenal. Hantidiisa waxa lagu qiyaasaa in ka badan 18 Milyaar oo Dollar.
3- Maalqabeenka saddexaad, waa Maalqabeen isna Ruush ah oo lagu magacaabo Suleyman Kirimov oo ah Mulkiilaha kooxda kubadda cagta wadanka Ruushka ee Anji oo ah kooxdii uu u wareegay Samuel Eto’o ka hor intii aanu Shiinaha tagin. Maal-qabeenkani waxa uu haystaa adduun dhan 16-Milyar oo Dollar.
4- Maal-qabeenka Hindiga ah ee Lakashmi Mital oo ah ninka iska leh naadiga kubadda cagta wadanka Ingiriiska ee Queens Park Rangers ayaa kaalinta afraad ku jira, waxaana hantidiisa lagu sheegaa in ka badan 16-Milyar oo Dollar.
5- Paul Alen, oo ah Maal-qabeen Maraykan ah ayaa kaalinta shanaad ku jira waxaanu maal-qabeenkani inta ugu badan leeyahay kooxda kubadda cagta wadanka Maraykanka ee Seattle, waxaanay Hantidiisu kor u dhaaftay 15-Milyar oo dollar.
6- Kaalinta lixaad waxa ku jira Ramon Abramovic oo aad wada garanaysaan, waana Hantiilaha isla leh kooxda kubadda cagta wadanka Ingiriiska ee Chelsea, waxaanay Hantidiisu Cagacagaynaysaa ku dhawaad 12-Milyar oo dollar.
7- Kaalintan waxa ku jira Maal-qabeenka Carbeed ee Naasir Al-khaliifi oo ah Mulkiilaha telefishanka Aljazeera, ahna Mulkiilaha kooxda kubadda cagta wadanka Faransiiska ee PSG. Naasir Al-Khaliifi waxa uu saami weyn ku leeyaay shirkadda Qatar Airways waxaanay Hantidiisu dhan tahay 10-Milyar oo dollar, waana nin dhallinyaro ah. Ninkan ayaa ah mid awood ku leh dalalka Carabta.